Kooriyaan Kaabaa torbaan tokko keessatti yeroo lama yaalii Misaa’elaa geggeessuu gabaafame
Qondaaltonni Waraana Kooriyaa Kibbaa akka jedhanitti, Kooriyaan Kaabaa misaa’ela fageenya gabaabaa furguuggeeffamuu torbaan kana keessa yeroo lama gama baha biyyattii keessatti yaalte. Yaaliin Misaa’elaa Piyong-Yang ammaa kuni Prezdaant Traampii fi hogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un Waxabajjii dabre wal arganii eega mari’atanii booda isa jalqabaati.
Kooriyaan Kaabaa yaaliin misaa’elaa ammaa kun, “shaakala waraanaa Ameerikaa fi Kooriyaan Kibbaa waliin geggeessuuf qophaayaa jiran mormuun akeekkachiisa kenname” jechuun himte. Kooriyaan Kaabaa akka jettutti, June dabre Ameerikaan waraana daangaa Kooriyaa lamaanii irraa kaasuuf, Kooriyaan Kaabaa ammoo yaalii Niwkilarii dhiisuuf walii galanii turan. Haata’u malee Ameerikaan walii galtee kana cabsuun Piyongiyang kan dallansiise tahuu ibsame.
Misaa’elli ammaa kun 250km kan furguuggifame yoo tahu, lafaa irraa ol 30km fagaachuun galaana Jaappaan irra kan qubate tahuu odeeyfannoon ni addeessa. Muummichi Ministeera Jaappaan Shinzoo Abee gama isaatiin, yaalii misaa’ela Kooriyaa Kaabaa waliin wal qabatee nageenya biyya keennaa irratti dhiibbaan dhaqqabe hin jiru jechuu isaa BBC’n gabaase.